Miarahaba antsika nahatratra ADVENTO 2016 – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
« Misaora an’i Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina » (Sal 103:1)
Izany teny izany no iarahabana antsika rehetra nahatratra izao Alahadin’ny Advento izao sady taom-baovaom-piangonana.
Ny Advento moa dia avy amin’ny teny latina hoe: »Adventus » midika hoe: fihaviana na fahatongavana ka raha tsorina dia fahatongavan’ny Tompo no banjinina amin’izao Advento izao.
Raha miresaka fahatongavana isika dia ny fahatongavana ho nofo no ao an-tsaina amin’izao Krismasy izao fa tsy izany ihany fa eo koa ny fahatongavan’i Jesosy eny amin’ny rahon’ny lanitra amin’ny andro farany, ary ny manelanelana azy roa ireo dia ny fahatongavany eo amin’ny fiainantsika ankehitriny amin’ny alalan’ny teny sy ny Sakramenta.
Sady fampiomanana no fampitandremana hoantsika ny Advento; fampitandremana satria tsy maintsy hoavy ny Tompo ka raha tsy vonona hibebaka isika ka tsy miorina amin’ny finoana dia fahaverezana mandrakizay no miandry antsika, koa ampiomanina isika mba tsy ho tampoka amintsika izany fotoana izany. Ireo fotoana telo ireo araka izany dia mifameno sy mifampiankina: Jesosy Ilay tonga nofo ihany no miditra amin’ny fiainantsika ankehitriny ary Izy ihany koa no ho avy amin’ny andro farany hitsara izao tontolo izao.
Koa dia mahereza daholo ary aza avela handalo fotsiny amin’ny fiainanao ny fahatongavan’i Jesosy, fa raiso ho fiainanao Izy fa ao Aminy irery ihany no misy fiainana mandrakizay, Izay mino ny Zanaka no manana fiainana mandrakizay.
Mirary ny fiadanan’i Jesosy ho antsika!
(Nosoratan’i Raiamandreny Pastora Raharimanana Eugène, FLM 67Ha)